IParaidolia ifumana ubuso kwizinto ezingqonge thina | Izidalwa ezikwi-Intanethi
IParaidolia ifumana ubuso kwizinto ezisingqongileyo kwimihla yethu yonke into yenza yonke into ibe nguweIhlabathi eligcwele abalinganiswa abakhoyo kodwa bacaphukisa kuthi ingcamango yokuba bayinyani.
Ngexesha elithile siye saqaphela into kwaye siqaphele ubukho bohlobo lwe imilo eyaziwayo, inokuba bubuso okanye into esele siyazi. Esi siphumo sibizwa ngokuba yi paraidolia kwaye inxulumene nendlela esiyijonga ngayo imeko-bume yethu.
Wethu ukuqonda kusibonisa umhlaba osekwe kukumiswa yenziwe ngengqondo yethu xa ibona izinto ezisijikelezileyo, oku kugqitywa kusekwe kwi ubudlelwane beefom ngohlobo lokuba xa ufumana ifom engenantsingiselo eyaziwayo kwingqondo yethu, into eyenzayo kukujonga ubudlelwane esele bukhona, Ngesi sizathu sibona ubuso emabala eludongeni, kwimizobo engabonakaliyo okanye kumafu esibhakabhakeni. Iingqondo zethu kufuneka zisibonise into esele iyaziSiyabulela kule nto sinokuyonwabela umdlalo obonakalayo.
Nawuphi na umntu ongasesitalatweni angamntu kwaye wenze umfanekiso omnandi wokwabelana nehlabathi.
El Umculi waseBulgaria UVanyu Krastev ukukhangela izinto kwimeko yazo kwaye ziguqula zibe ziiparaidolias ezenziwe ngabantu, Yongeza amehlo amancinci kuzo zonke ezi zinto ukufumana Isiphumo esidlamkileyo nesinomtsalane kwinqanaba lokubonwayo. Oku Inyathelo elibiziweyo ngamehlo Yenziwe ngamagcisa amabini aseDenmark. Okwangoku sinokufumana imifanekiso emininzi yolu hlobo kwinethiwekhi apho zonke iintlobo zabantu zenza abalinganiswa bazo ngokusekwe kule mpembelelo inomdla.
IPodemos ziqhelanise nale meko ngokujonga isibhakabhaka kwaye ujonge iimilo zezilwanyana, nokuba ngumdlalo womntwana ingasinceda siphucule ukucinga ngaxeshanye siphumle. Izitalato azisoze zifane ukuba siqala jonga iiparaidolias kuyo yonke into ekungqongileyo.
Unokuba nomdla kwezi zixhumanisi zentshukumo ibhombu:
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Abadlali » IParaidolia ifumana ubuso kwizinto ezisingqongileyo
UAlmudena Gonzalez sitsho
Phendula uAlmudena González
Izidalwa ezikwi-Intanethi sitsho
Unyanisile, typo yabekwa. Enkosi ngokucebisa!
Phendula kwi-Intanethi kwi-Intanethi
UAinoa Dingo sitsho
UMayca Benlloch Alcañiz sele sinegama "lengxaki encinci" yakho
Phendula kwiAinoa Dingo
UMayca Benlloch Alcañiz sitsho
hahahaha yinyani !!! Ndingaya ekugqibeleni kwingcali! Enkosi! XD
Phendula uMayca Benlloch Alcañiz
Ukubaluleka koyilo kwivenkile ekwi-intanethi